ရီးယဲလ် နိုင်ပွဲဆက်ခဲ့ပေမယ့် အိမ်ကွင်းမှာ မထင်မှတ်ဘဲ ရှုံးခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ
အိမ်ကွင်းမှာ မထင်မှတ်ဘဲ ဘာစီလိုနာရှုံးပွဲတွေ့ခဲ့ပြီး နိုင်ပွဲဆက်နေတဲ့ ရီးယဲလ်
12 Nov 2018 . 5:13 PM
လာလီဂါပွဲစဉ် (၁၂)မှာတော့ မထင်မှတ်တဲ့ ရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ အိမ်ကွင်းမှာ မထင်မှတ်ဘဲ ဘက်တစ်ကို ရှုံးပွဲတွေ့ခဲ့တာကြောင့် သူ့နောက်က ဆီဗီလာ၊ အက်သလက်တီကို၊ အလာဗတ်စ်တို့နဲ့ (၁)မှတ်ပဲ ကွာဟပါတော့တယ်။ ယာယီနည်းပြ ဆိုလာရီ Santiago Solari လက်ထက်မှာ တောက်လျှောက် ရလဒ်တွေ ကောင်းနေတဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း အိမ်ကွင်းခြေစွမ်းမာတဲ့ ဆယ်လ်တာဗီဂိုအသင်းကို (၄-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲစုံ (၄)ပွဲဆက် အနိုင်ရရှိခဲ့တယ် . . .
ဘာစီလိုနာ ၃-၄ ဘက်တစ်
ဒီပွဲဟာ ဘာစီလိုနာအတွက် Upset ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဘက်တစ်အတွက် ထိုက်သင့်တဲ့ နိုင်ပွဲလို့ပြောရမယ်။ Counter Attacking ကို အကောင်းဆုံး ကစားခဲ့ပြီး ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ညာခြမ်းက ဆာဂျီရော်ဘတ်တို Sergi Roberto ဟာ ဘက်တစ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကို ဘယ်လိုမှ မထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဘက်တစ်အသင်း ရခဲ့တဲ့ ဂိုးတွေကလည်း ဆာဂျီရော်ဘတ်တိုရဲ့ ညာခြမ်းကနေ အဓိက ထိုးဖောက်တိုက်စစ်ဆင်ရင်းနဲ့ ရရှိခဲ့တာပါ။ ထုံးစံအတိုင်း ဘာစီလိုနာအသင်းက ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု အသာစီးရယူပြီး ဘက်တစ်ဘက်ကို ထိုးဖောက်ခဲ့ပေမယ့် ဘက်တစ်ခံစစ်က အမှားအယွင်းမရှိခဲ့ဘူး။
မိနစ်(၂၀)မှာ ဘက်တစ် အဖွင့်ဂိုးရခဲ့ပြီး Junior Firpo က ဆာဂျီရော်ဘတ်တိုရဲ့ အားနည်းချက်ကနေ သွင်းယူခဲ့တာပါ။ (၃၄)မိနစ်မှာ ဘက်တစ် ဒုတိယဂိုးရခဲ့ပြီး ညာခြမ်းက တယ်ယို Cristian Tello ဖြတ်ပို့ပေးတာကို ၀ါရင့်ကစားသမား ယာကွင်း Joaquín က အမှားအယွင်းမရှိ ကန်သွင်းခဲ့တယ်။ (၆၈)မိနစ်မှာ ပယ်နယ်တီကနေ မက်ဆီ Messi က ချေပဂိုးပြန်သွင်းခဲ့ပေမယ့် ဘက်တစ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေကို ဘာစီလိုနာ ခံစစ်က မထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့လို့ ဂိုးတွေထပ်ပေးခဲ့ရတယ်။ (၇၁)မိနစ်မှာ သွင်းယူခဲ့တဲ့ Lo Celso ရဲ့ဂိုးကတော့ ဘာစီလိုနာဂိုးသမား စတီဂန် Stegen ရဲ့ အားနည်းချက်ကနေ ပေးခဲ့ရတာပါ။
ဘာစီလိုနာအတွက် ဗီဒယ်လ် Vidal က ဒုတိယချေပဂိုး သွင်းယူခဲ့ပြီး မကြာခင်မှာပဲ ဘက်တစ်ကစားသမား ကာနာလက်စ် Canales က စတုတ္ထဂိုး သွင်းခဲ့လို့ ဘာစီလိုနာ ဆေးမမီဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ (၉၃)မိနစ်မှာ မက်ဆီ ချေပဂိုး ထပ်သွင်းခဲ့ပေမယ့် ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ မက်ဆီ (၂)ဂိုးနဲ့အထက် သွင်းယူခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာ ပထမဆုံး ရှုံးပွဲကြုံတွေ့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ်လ်တာဗီဂို ၂-၄ ရီးယဲလ်
ဒီနိုင်ပွဲအတွက် ရီးယဲလ်ကစားသမားတွေနဲ့ နည်းပြ ဆိုလာရီကို မဖြစ်မနေ ချီးကျူးရမှာပါ။ World Class Players တွေ သိပ်မရှိတော့တဲ့ အသင်းမှာ ဒုတိယတန်းစား ကစားသမားတွေနဲ့ ဒီလိုရလဒ်ထွက်ပေါ်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာက ဆိုလာရီရဲ့ အရည်အသွေးကို ပြသနေသလိုပါပဲ။ ဆယ်လ်တာဗီဂိုကတော့ အိမ်ကွင်းခြေစွမ်းကောင်းကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး အခွင့်အရေးတွေလည်း ရခဲ့ပေမယ့် ဂိုးကံခေခဲ့တယ်။ ရီးယဲလ်အတွက် အဖွင့်ဂိုးကို (၂၃)မိနစ်မှာ မိုဒရစ် Modric ရဲ့ ပေးပို့မှုကနေ ဘန်ဇီမာ Benzema က သွင်းယူခဲ့တာပါ။ (၅၆)မိနစ်မှာ ဘန်ဇီမာရဲ့ ကန်ချက်က Cabral နဲ့ထိပြီး ဂိုးဝင်သွားလို့ ရီးယဲလ် ဖိအားလျော့သွားခဲ့တယ်။
အဲဒီနောက်မှာ ပယ်နယ်တီကနေ ရာမို့စ် Ramos ၊ (၉၁)မိနစ်မှာ စီဘယ်ယို့စ် Ceballos တို့က ဂိုးတွေ ဆက်တိုက်သွင်းယူခဲ့ပြီး ဆယ်လ်တာဗီဂိုအတွက် ဒုတိယချေပဂိုးကို Brais Méndez က (၉၄)မိနစ်မှာ သွင်းယူခဲ့တယ်။ ဒီပွဲအနိုင်ရခဲ့လို့ ဆိုလာရီဟာ ပယ်လီဂရီနီ Manuel Pellegrini (၂၀၀၉- ၇ပွဲ)နောက်ပိုင်း ရီးယဲလ်နည်းပြဘ၀ (၄)ပွဲဆက် နိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးနည်းပြအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။
UD Levante 1 –3Real Sociedad
Getafe0– 1 Valencia CF
Atletico Madrid3–2Athletic Bilbao
Girona0–0Leganes
Deportivo Alaves2– 1 SD Huesca
Barcelona3–4Real Betis
FC Sevilla2– 1 Espanyol Barcelona
Photo:DNA India,Real Madrid Twitter,Barcelona Twitter
အိမျကှငျးမှာ မထငျမှတျဘဲ ဘာစီလိုနာရှုံးပှဲတှခေဲ့ပွီး နိုငျပှဲဆကျနတေဲ့ ရီးယဲလျ
လာလီဂါပှဲစဉျ (၁၂)မှာတော့ မထငျမှတျတဲ့ ရလဒျတှေ ထှကျပျေါခဲ့တယျ။ ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ အိမျကှငျးမှာ မထငျမှတျဘဲ ဘကျတဈကို ရှုံးပှဲတှခေဲ့တာကွောငျ့ သူ့နောကျက ဆီဗီလာ၊ အကျသလကျတီကို၊ အလာဗတျဈတို့နဲ့ (၁)မှတျပဲ ကှာဟပါတော့တယျ။ ယာယီနညျးပွ ဆိုလာရီ Santiago Solari လကျထကျမှာ တောကျလြှောကျ ရလဒျတှေ ကောငျးနတေဲ့ ရီးယဲလျအသငျးဟာ ဒီတဈပတျမှာလညျး အိမျကှငျးခွစှေမျးမာတဲ့ ဆယျလျတာဗီဂိုအသငျးကို (၄-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုငျယူခဲ့ပွီး ပွိုငျပှဲစုံ (၄)ပှဲဆကျ အနိုငျရရှိခဲ့တယျ . . .
ဘာစီလိုနာ ၃-၄ ဘကျတဈ
ဒီပှဲဟာ ဘာစီလိုနာအတှကျ Upset ဖွဈခဲ့ပမေယျ့လညျး ဘကျတဈအတှကျ ထိုကျသငျ့တဲ့ နိုငျပှဲလို့ပွောရမယျ။ Counter Attacking ကို အကောငျးဆုံး ကစားခဲ့ပွီး ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ ညာခွမျးက ဆာဂြီရျောဘတျတို Sergi Roberto ဟာ ဘကျတဈအသငျးရဲ့ တိုကျစဈကို ဘယျလိုမှ မထိနျးခြုပျနိုငျခဲ့ဘူး။ ဘကျတဈအသငျး ရခဲ့တဲ့ ဂိုးတှကေလညျး ဆာဂြီရျောဘတျတိုရဲ့ ညာခွမျးကနေ အဓိက ထိုးဖောကျတိုကျစဈဆငျရငျးနဲ့ ရရှိခဲ့တာပါ။ ထုံးစံအတိုငျး ဘာစီလိုနာအသငျးက ဘောလုံးပိုငျဆိုငျမှု အသာစီးရယူပွီး ဘကျတဈဘကျကို ထိုးဖောကျခဲ့ပမေယျ့ ဘကျတဈခံစဈက အမှားအယှငျးမရှိခဲ့ဘူး။
မိနဈ(၂၀)မှာ ဘကျတဈ အဖှငျ့ဂိုးရခဲ့ပွီး Junior Firpo က ဆာဂြီရျောဘတျတိုရဲ့ အားနညျးခကျြကနေ သှငျးယူခဲ့တာပါ။ (၃၄)မိနဈမှာ ဘကျတဈ ဒုတိယဂိုးရခဲ့ပွီး ညာခွမျးက တယျယို Cristian Tello ဖွတျပို့ပေးတာကို ဝါရငျ့ကစားသမား ယာကှငျး Joaquín က အမှားအယှငျးမရှိ ကနျသှငျးခဲ့တယျ။ (၆၈)မိနဈမှာ ပယျနယျတီကနေ မကျဆီ Messi က ခပြေဂိုးပွနျသှငျးခဲ့ပမေယျ့ ဘကျတဈအသငျးရဲ့ တိုကျစဈဆငျမှုတှကေို ဘာစီလိုနာ ခံစဈက မထိနျးခြုပျနိုငျခဲ့လို့ ဂိုးတှထေပျပေးခဲ့ရတယျ။ (၇၁)မိနဈမှာ သှငျးယူခဲ့တဲ့ Lo Celso ရဲ့ဂိုးကတော့ ဘာစီလိုနာဂိုးသမား စတီဂနျ Stegen ရဲ့ အားနညျးခကျြကနေ ပေးခဲ့ရတာပါ။
ဘာစီလိုနာအတှကျ ဗီဒယျလျ Vidal က ဒုတိယခပြေဂိုး သှငျးယူခဲ့ပွီး မကွာခငျမှာပဲ ဘကျတဈကစားသမား ကာနာလကျဈ Canales က စတုတ်ထဂိုး သှငျးခဲ့လို့ ဘာစီလိုနာ ဆေးမမီဖွဈခဲ့ရတယျ။ (၉၃)မိနဈမှာ မကျဆီ ခပြေဂိုး ထပျသှငျးခဲ့ပမေယျ့ ဘာမှ မတတျနိုငျတော့ပါဘူး။ ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ မကျဆီ (၂)ဂိုးနဲ့အထကျ သှငျးယူခဲ့တဲ့ပှဲတှမှော ပထမဆုံး ရှုံးပှဲကွုံတှခေဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
ဆယျလျတာဗီဂို ၂-၄ ရီးယဲလျ
ဒီနိုငျပှဲအတှကျ ရီးယဲလျကစားသမားတှနေဲ့ နညျးပွ ဆိုလာရီကို မဖွဈမနေ ခြီးကြူးရမှာပါ။ World Class Players တှေ သိပျမရှိတော့တဲ့ အသငျးမှာ ဒုတိယတနျးစား ကစားသမားတှနေဲ့ ဒီလိုရလဒျထှကျပျေါအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့တာက ဆိုလာရီရဲ့ အရညျအသှေးကို ပွသနသေလိုပါပဲ။ ဆယျလျတာဗီဂိုကတော့ အိမျကှငျးခွစှေမျးကောငျးကို ထိနျးသိမျးနိုငျခဲ့ပွီး အခှငျ့အရေးတှလေညျး ရခဲ့ပမေယျ့ ဂိုးကံခခေဲ့တယျ။ ရီးယဲလျအတှကျ အဖှငျ့ဂိုးကို (၂၃)မိနဈမှာ မိုဒရဈ Modric ရဲ့ ပေးပို့မှုကနေ ဘနျဇီမာ Benzema က သှငျးယူခဲ့တာပါ။ (၅၆)မိနဈမှာ ဘနျဇီမာရဲ့ ကနျခကျြက Cabral နဲ့ထိပွီး ဂိုးဝငျသှားလို့ ရီးယဲလျ ဖိအားလြော့သှားခဲ့တယျ။
အဲဒီနောကျမှာ ပယျနယျတီကနေ ရာမို့ဈ Ramos ၊ (၉၁)မိနဈမှာ စီဘယျယို့ဈ Ceballos တို့က ဂိုးတှေ ဆကျတိုကျသှငျးယူခဲ့ပွီး ဆယျလျတာဗီဂိုအတှကျ ဒုတိယခပြေဂိုးကို Brais Méndez က (၉၄)မိနဈမှာ သှငျးယူခဲ့တယျ။ ဒီပှဲအနိုငျရခဲ့လို့ ဆိုလာရီဟာ ပယျလီဂရီနီ Manuel Pellegrini (၂၀၀၉- ၇ပှဲ)နောကျပိုငျး ရီးယဲလျနညျးပွဘ၀ (၄)ပှဲဆကျ နိုငျခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးနညျးပွအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့တယျ။